ဖလက်သီချင်းများ ~ ကိုရဲဝင်းထွန်း(မှတ်စု)
ကွန်ပြူတာသန့် ရှင်းရေး ဆော့ဝဲလ်များဖြုပ်ထုပ်ရန်
ကွန်ပြူတာအလှဆင်ရန် မိသားစုအမှတ်တရ ဘလော့နည်းပညာများ ကာတွန်း .
(သီချင်းစာမျက်နာ ၂ သို့ ဒီမှာနိပ်လိုက်ပါရန် )
(သီချင်းစာမျက်နာ ၃ သို့ ဒီမှာနိပ်လိုက်ပါရန် )
(သီချင်းစာမျက်နာ ၄ သို့ ဒီမှာနိပ်လိုက်ပါရန် )
(သီချင်းစာမျက်နာ ၅ သို့ ဒီမှာနိပ်လိုက်ပါရန် )
ရွှေတိဂုံ ရွှေတိဂုံ(၂) ဓမ္မဒါန အမေ-ထူးအိမ်သင် မ-sample မ-ပူစူး မင်းကိုသတိရရင် တွဲဖက်အပြုံး-ရိန်မိုး အရမ်းပဲချစ်နေပြီ-ရိန်မိုး လေပြေ ဆုအမေတခုသားတခုအရမ်းပဲချစ် ဘယ်သူမှမကောင်းဘူး ဖြည့်ဆည်းပေးမဲ့သူ ရိုမီယို ဂျူးလီးယက် တောဂေါ်လီ သူလေးရင်ခုန်ဘက်သို့တမ်းခြင်း ကြွေပါစေ လမ်းမခွဲကြေး မင်းနဲ့ငါနဲ့မေမေ မင်းအတွက်ပါ သနပ်ခါးချစ်သူ အနီးဆုံးလူ ကြွေးဟောင်းဆပ်ခွင့်ပြုပါအမေ သင်္ကြန်မိုး အပြစ်မမြင်ပါဘူး ကမ္ဘာအပြင်
ဘက်နှလုံးသားရှိတဲ့အရပ်မျောလွှင့်နေတဲ့တိမ်မင်းအကြောင်းအိမ်မက် မိန်းမယူရင်စဉ်းစားကျ ချစ်သူရင်ခွင် ချစ်ကံဆိုး အပြုံးလေးနတ်သမီးလမင်းသို့ သီချင်းမဲ့ဂီတာအမောပြေ ဆုတောင်းမယ်ဆုတောင်းမယ်(၂) ဟိုအရင်လို မိုးသည်းထဲမှာ အမေနင်ပြန်လာခဲ့ ပေးဆပ်ခွင့် အချစ်အတွက်ကံမကောင်းခဲ့သူ ချစ်တယ်ဟုတ် ဖန်သားနန်းတော် ဒို့လည်းလိုက်မယ်မြတ်နိုးသူအတွက် ပုံရိပ်လေး ပြန်တော့ကွယ် အချစ်ကိုသိချိန် မင်းတယောက်သာမမချစ်လို့မဖြစ်အမြတ်နိုးဆုံး ချစ်ခွင့်ရခြင်ပြီခွဲခွာရက်သူ ဘာကြောင့်လဲ အတ္တငါ့ကိုပြောပါမျှော်လင့်ချက်မဲ့(မျိုးကြီး)ယုံကြည်ပေးပါ BellyDancerယုံကြည်ပေးပါ(Remix)အဖြူရောင်လေးပါကွယ်ရင်ထည်းခိုနားလှည့်ပေါ့ကွယ်
တို့နှစ်ယောက်အကြောင်း ရုပ်သေးရုပ် ဒီမိုးသည်းချိန်တိုင်းမှာ ပြန်ဆုံနိုင်ဦးမလား မင်းနဲ့အတူရှိချင် ကြွေနေပြီ တိုကျိုအိပ်မက် မနှုတ်ဆက်ချင်ဘူး အာဒံဧ၀ တောင်းပန်ပါတယ် I Love U Baby BabY Cry On My Sailing HONEY(အာဇာနည်) ကိုယ့်ရဲ့သက်တန့်ငယ် အလွမ်းဝင်္ကပါ မ မရှိတဲ့နေ့ရက်များ ခါး(အငဲ) သိမ်းထားခွင့် WeddingDress မင်းရှိစေချင်တယ် ONLYLOVE ကိုယ်ပိုင်တဲ့ကိုယ့်နေရာ တန်ဖိုး(လေးဖြူ) 0
ငါသည် လောက၌ ဆိုးသော အခြေ အနေ၌လည်း စိတ် မပျက် ရပါစေ နှင့် !လောက၏ ကောင်းသောအခြေ အ နေကို လည်း မတပ်မက် ရပါစေ နှင့်!ကောင်းဒဏ်/ဆိုးဒဏ် ဤနှစ် တန် ကိုခံနိုင် မည့် သူ ဖြစ် ရ ပါစေ လို၏!
အတိုက်အခံတို့ရဲ့ အတိုက်အခံ ဘလော့
KING OF THE UNIVERSE ဘလော
MM BLOGGER POSTS
NEWPOWER of BURMA
စားကြမယ်ဟေ့ ကောင်းကောင်း (ချက်နည်းပြုတ်နည်း)
ဘလော့ နည်းပညာများ ထိုင်းဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ သရဲ
ယခု ရေသောက်ခြင်းကုထုံးဟာ ယခင်က သိရှိဖူးသားဖြစ်မယ်ဆိုရင်တောင်မှ ထပ်ဖတ်မယ် ဆိုရင်လည်း ဖတ်ထိုက်တဲ့ ကုထုံးဖြစ်ပါတယ် ။ ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်ကြ...
PowerISO ဆောဝဲလေးကတော့ အခွေ Burn ဖို့ အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ မိမိ သိမ်းချင်တဲ့ Data ဖိုင်တွေကို PowerISO ဆောဝဲလေးနဲ့ CD/DVD အခွေ ထဲ Bur...
http://www.myanmarexpress.net/2012/10/blog-post_8213.html(ကူးယူထားပါသည်) အဖေ့သမီးအတွက် သမီးအတွက်..ဖခင်ရဲ့ ဥပမာကောင်းလေးတစ်ခု........
Folder ကို Lock ခတ်ချင်သူတွေ အတွက်
Internet Browser အထွေထွေSoftwares
Keymaker and Keygen
PC အတွက် အကောင်းဆုံး Web Browser (10) ခု
Window7All in one loader
ကွန်ပျူတာမှာ ဓာတ်ပုံ ဗီဒီယို ရိုက်ချင်သူတွေအတွက်
၂၀၁၂. ၇.၂၁နေ့မှစ၍ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်..။. Powered by Blogger.
Copyright © ကိုရဲဝင်းထွန်း(မှတ်စု) | Powered by Blogger